नेपाली सेयर बजारकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ खुला, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ? - Vishwanews.com
नेपाली सेयर बजारकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ खुला, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको छ। बैंकले सर्वसाधारण समूहतर्फको ८ करोड कित्ता आइपिओ छिटोमा माघ ६ गतेसम्म निष्काशन गर्नेछ। यदि पहिलो चरणमा बिक्री नभए दोस्रो चरणमा माघ १६ गतेसम्म निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ।
बैंकले ८ करोड कित्तामध्ये कर्मचारीका लागि एक लाख ६० हजार कित्ता सुरक्षित गरेको छ। त्यस्तै म्युचुअल फण्डहरुलाई ५ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख कित्ता बिक्री गरिसकेको छ। कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई बिक्री गरेर बाँकी रहेको ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने भएको हो।
बैंकले नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको हो। यसअघि अपर तामाकोशीले सर्वसाधारणका लागि सर्वाधिक प्राथमिक शेयर जारी गरेको थियो। हाल बैंकको संस्थापकहरुको शेयर पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। प्राथमिक शेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
अहिलेसम्मको शेयर संचरनाअनुसार नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व १६.६७ प्रतिशत रहेको छ। प्राथमिक शेयर निष्काशनपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व १० प्रतिशतमा खुम्चिनेछ। बैंकमा नेपाल सरकारको लगानी २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै हाल वाणिज्य बैंकहरुको शेयर स्वामित्व ३४.८२ प्रतिशत रहेको छ। प्राथमिक शेयर निष्काशनपछि उनीहरुको पनि शेयर स्वामित्व २०।८९ प्रतिशतमा खुम्चिने छ। हाल उनिहरुको लगानी ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ। लगानीकर्ताहरुले आस्वा सुविधा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको चन्द्रगिरी हिल्समा १२ लाख ५६ हजारले आवेदन दिएका छन्। यदि अधिकतम १५ लाख लगानीकर्ताले नै आवेदन दिए भने पनि न्युनतम ५० कित्ता पर्नेछ। यसमा पनि सबै लगानीकर्ताले ५० कित्ताको आवेदन दिदैनन्। १० कित्ताको लागि आवेदन दिदा पनि शेयर नपाइरहेको सन्दर्भमा अधिकांशले १० कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
लगानीकर्ताले अधिकतम ७० कित्ताको लागि आवेदन दिनु बुद्धिमता हुन्छ। अधिकतम कित्ता पार्न चाहने लगानीकर्ताले १०० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिनु राम्रो हुन्छ।